YouTube Facts in yaabaa inaadan ogayn
In ka badan 50 YouTube Facts in yaabaa inaadan ogayn Laakiin ogaato
Waxaad noqon arrin aqoon u leh YouTube, ama waxa laga yaabaa in si dhab ah. Waa maya faanayay in weli ay jiraan xaqiiqooyinka quruxsan badan oo ku saabsan YouTube in aadan ogaan laga yaabaa in aad maalin kasta gaarin. Sababta waxaa laga yaabaa in aadan i xiiseynaya oo dhan ama ilo daaha ka xaqiiqooyinka kale ay iska yartahay.
Taasi waa sababta aynu halkan u joognaa inaan kuu soo bandhigo ka badan 50 xaqiiqada ah in aynu ka heli kartaa internetka. Waxaan rajeynayaa, waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan YouTube iyo xitaa marti qaaday. Bal aan iyaga ka soo hubi hoos ku qoran.
Eeg waxa YouTube xaqiiqooyinka aad xiisaynayso?
YouTube iyo ganacsiga
Chad Hurley, Steve Chen, iyo Jawed Karim bilaabay YouTube 2005. Steven Chen ayaa ku dhashay Taipei, Taiwan, 1978 oo u dhaqaaqay USA markii uu ahaa sano oo kaliya 8 jir. Marka qalin, uu hoos u soo baxay jaamacadaha iyo u tageen inay shaqeeyaan Confinity, oo starte PayPal ka dib.
Chad Hurley waxa uu ku dhashay Birdsboro, Pennsylvania, 1977 oo ahaa nin orodada tayo leh. Waxa uu ku guuleystay labo horyaal gobolka cross-dalka ee 1992 iyo 1994.
Jawed Karim waxa uu ku dhashay Merseburg, East Germany, 1979. Waxay ahaayeen labadiisii ​​waalid saynisyahano. Wuxuu u abuuray Eebe nidaamka email ah ee dugsiga sare uu.
Fikradda for YouTube ka timid laba dhacdo si fiican u yaqaan. Mid ka mid ah waa xaflad casho ah, Chen iyo Hurley waxa helin hab fudud si ay ula wadaagaan sawirada saaxiibadooda. Kale waa mar kale xaflad, saddexda Aasaasayaasha u YouTube wada hadleen sida ay u adag waxa uu ahaa in la helo video clips dhacdooyinka la mid ah 2004 koonfur bari Asia tsunami.
YouTube iyo PayPal
Saddexda aasaasayaasha YouTube loo isticmaalo in ay wada shaqeeyaan ee Paypal. Oo kuwii iibsan-out of PayPal by Arbacada mahad, YouTube helay ay fund hore sida xawaaladaha ah.
youtube.com, magac domain ah, ayaa waxaa ka diiwaan gashan xaq ah oo ku saabsan Maalinta Jacaylka ee 2005 iyo helay caan weyn. Laakiin dadka isticmaala inta badan tagaan si ay utube.com, taas oo sida youtube.com codadka dhawaqa. Taasi dhibaato sababa u utube.com oo xitaa saamayn ay ganacsi, sida la sheegay. Shirkadda for utube.com dacweeyay YouTube laakiin sheegashadaas ka helay dimissed. Ugu dambeyntii, utube.com dhaqaaqay utubeonline.com in ay ka fogaadaan khasaare dheeraad ah.
Uploaded video ugu horreysa ee YouTube
Video ugu horeeyay ee uploaded in YouTube waa iga at zoo ah, kaas oo uu helay in ka badan 15 milyan oo views ilaa iyo haatan.
Tirakoobka aasaasiga ah iyo tirooyin
Tirada YouTube users firfircoon bil kasta waa 1 billion .
Total views YouTube ee 2011 waa 1 trillion .
100 saacadood video youtube uploaded in daqiiqad kasta.
3 saacadood oo ah video waxaa uploaded in YouTube daqiiqad kasta oo ku saabsan mobile.
The hits u YouTube ee homepage gaaraan 45.000.000 .
6 bilyan oo saacadood oo video yihiin daawaday bishii on YouTube.
Waxaa jira in ka badan 7,000 oo saacadood oo dhererkeedu buuxa filimada iyo bandhigyada on YouTube in aad daawan karto lacag la'aan.
10% ka mid ah YouTube ee videos waa waayo-aragnimo fiican heli karaa HD.
Waxay qaadan doontaa 1700 oo sano ama ka badan si uu u daawado oo dhan videos ku YouTube ilaa 2011.
YouTube video comment / tirakoobka rating
In ka badan 50% videos on YouTube is qiimeeyo ama qabtid wax ah faalooyin.
Waxaa jira malaayiin videos hesho kooxaha maalin kasta.
Tirada ay laba-laab tan iyo 2011 tak badhanka ah jecelyahay iyo wuxuu necebyahay.
Dadka jecel yihiin in ay u sheeg saaxiibadaa videos ay jecel yihiin oo aan jeclayn kasta la Timaadda 10 ciyaartoyda u YouTube videos.
YouTube qaybinta dadka iyo juqraafi
Users YouTube waxy 18 ilaa 54 sano jir.
YouTube daboolayaa 73 dalal iyo dhulal ah.
YouTube waxaa lagu heli karaa 61 luqadood.
Todobaatan boqolkiiba ka mid ah gaadiidka on YouTube bannaanka ka yimaada dalka Mareykanka.
Dadka daawado 500 sano ee YouTube videos on Facebook maalin kasta.
Dadka wadaagaan in ka badan 700 YouTube videos on Twitter halkii daqiiqo.
Waxaa jira in ka badan 500 oo tweets containng link YouTube ah daqiiqaddiiba.
100 milyan oo qof oo ku lug leh saamiga bulshada on YouTube toddobaad kasta.
YouTube on Twitter ayaa helay in ka badan 42 milyan oo kuwa raacsan tan iyo markii hore ku degay Twitter 2007.
YouTube on Facebook ayaa helay in ka badan 80 million kooxaha tan iyo markii hore ku degay Facebook ee 2005.
YouTube Google+ ayaa helay in ka badan 8 milyan oo kuwa raacsan ay ka fog.
YouTube on Instagram ayaa helay in ka badan 456K raacaynay ee ay ilaa iyo haatan.
YouTube hore sida goobta shukaansi ah
YouTube bilaabay goobta video ah oo shukaansi-dhigyo ah oo soco In Hook Up, laakiin ka dib saddexda Aasaasayaasha go'aansaday inaan aadin sidan. Iyo YouTube bilaabay inuu tago on wadada saxda ah.
Dheel dheel ah April Nacasyadu sanadlaha ah ee YouTube
YouTube ayaa bilaabay dheel dheel ah ay April 2008 la Rickroll ah. Sanadkii 2009, YouTube soo jeestay goobta ka yeellay korkoodii iyo 2010, ee "TEXTp" hab la soo bandhigay, oo midabo kala turjumay qoraalka. 2011 ee YouTube aad celiyey in 1911, taas oo ah in ay u dabaal ay 100 guuradii (nacas April). Sanadkii 2012, YouTube ku dhawaaqay YouTube Collection, oo aad u saamaxaaya in ay dalban wax videos in ururinta. Kaftan ugu weyn ee 2013 waxaa laga yaabaa in Google ku dhawaaqay in YouTube xidho. In 2014, YouTube qabo xiiso leh April Nacasyadu 'Maalinta yar la sii daayo trending ee 2014, oo ay ku jirto u safatay, subagga ku guuldareysto iyo in ka badan.
Ukunta Easter YouTube
YouTube ayaa bilaabay ukunta dhowr Easter dib taariikhaysan ilaa 2008. Users ayaa arrin ku riyaaqay kulan oo yar ama muuqaalada in YouTube bixisaa. Tusaale ahaan, waxaad ayaa laga yaabaa inuu taageere weyn u ah kulankii Mas , taas oo aan la shaqeeya tan iyo update 2013 ee. Hana aad weli isticmaalaan Missle Command , taas oo ah 1980? Waxaa weli ka shaqeynayo. Marka aad daawashada a video, nooca 1980 straightly aad keyboard iyo ciyaarta bilaaban. Waxaad u baahan tahay in ay isku dayaan in aad video shaashada ka missles ilaaliyo. Tusaale kale, nooca gariirayaa sharlem on YouTube ee searchbox ah, iyo YouTube eh doonaa. Halkan badan yihiin YouTube ukunta Easter inaan ku baashaalo.
Sida Google iyo Doodles ay, YouTube sidoo kale ay logo default ku beddeleen mid ka mid ah horyalka Talyaaniga, oo la xiriira taariikhda gaar ah sanad gudihii. Logos waxaa lagu magacaabaa YouTube Yoodles. Eeg waxa YouTube Yoodles u eg 2010.
Ugu daawan video YouTube ee
Cilmi - Gangnam Style yahay YouTube video ugu daawan ee waqtiga oo dhan iyo sidoo kale video ugu jeclaa. Oo waxay soo gaadheen 1.998.379.851 views ilaa hadda. Shirka labaad ee lagu noqon lahaa Justin Bieber ayaa Baby iyo Charlie caanka qaniinay aan farta ka dhigeysa 7. Haddii aad doonayaa inaan arko ugu daawan YouTube videos ee toddobaad kasta, waxaad eegi kartaa qodobkan .
YouTube ugu Naceen video
Rebecca Black ee "Friday" waxaa laga yaabaa in video ugu Naceen on YouTube. Waxaa helay 3.1 milyan oo ay neceb yihiin ka hor inta video music la xadiday. Qaar badan oo ka mid ah videos music Justin Bieber waa hits laakiin sidoo kale ay helaan badan oo ay neceb yihiin sida Baby, Weligaa ha ku odhan Marna iyo in ka badan. Hubi in ka badan in this article .
Marka Aasaasayaasha ah isku dayeen in ay In dadka YouTube in wajiga hore, ay ku bixiyeen $ 100 si ay gabdhaha u qurux badan oo posted 10 ama ka badan videos on goobta. Laakiinse ima ay wax jawaab u heli.
Video ugu dheer abid on YouTube waa 571 saacadood (23 maalmood)
YouTube ugu dhakhsaha badan ku baabbi'iyee yaabaa 1% ka mid ah korontada caalamka.
Saraakiisha badan ayaa u gaar ah YouTube ay channel, sida Queen, Baaraaq Obama iyo Pope.
Dabcan jaamacad A u hibeeyeen ilaa ay YouTube. College waa Pitzer College ee California; Dabcan waa la "Barashada ka YouTube" iyo sanadkii waa 2007.
Bishii May, 2008, YouTube caawiyay qabtaan Cyrus Yazdini u kharribaad tan iyo markii dambi lagu daabacay adventures uu darbiga ku YouTube.
Google iibsaday YouTube ee 2006 $ 1.65 billion.
YouTube waxa uu noqday engine labaad ee ugu weyn raadinta ee adduunka, ka dib markii Google.
YouTube waxa uu noqday goobta mosted booqday internet-ka ka dib markii Google, Facebook iyo Yahoo afaraad tan iyo 2013.
YouTube ayaa ku soo bilowday Times ay bixisay sanadkii 2013 oo ay adeeg cusub music geeyo lagu xamanayaa in la bilaabay in 2014.
YouTube waa meel wanaagsan in ay lacag sameeyaan internetka.
YouTube bilowday barnaamij rafiiq ee 2012.
Boqolaal ka mid ah la-hawlgalayaasheeda ayaa ka dhigeysa lix tirooyinka sano ah.
Advertising YouTube yimaado noocyada kala duwan sida xayeysiis Display, dahaadhaa in-video xayeysiis, TrueView in-il xayeysiis, TrueView in-bandhigay xayeysiis iyo Non-skippable in-il xayeysiis.
YouTube uu leeyahay in ka badan hal milyan oo xayeysiiya isticmaalaya dhufto ee ad Google, kuwaas oo badidoodu yihiin ganacsiyada yaryar
Kumanaan ka mid ah xayeysiiya isticmaalayso TrueView in-il iyo 60% ka mid ah YouTube-ka durduri xayeysiis hadda waa skippable
Xayaysiinta ugu caansan on YouTube waa Nike 'taabashada dahab' toogtay 2005 qaata in ka badan 1 milyan oo views, iyadoo ciyaaryahanka kubadda cagta ee reer Brazil Ronaldinho ayaa lagu dhiibtay.
> Resource > YouTube > 52 YouTube Facts in yaabaa inaadan ogayn Laakiin ogaato